Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ German Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Na-emepụta Ihe
LB na-egosi Full Story of a Goal Keeper onye kacha mara aha; "Messi na uwe". Marc-Andre Ter Stegen Childhood Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Ihe nyocha bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ihe di iche iche banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ngwa ngwa ngwa ngwa ya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole na-ama ọtụtụ ihe banyere Stegen's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mbido
Marc-André ter Stegen mụrụ na 30th ụbọchị nke April 1992 na Mönchengladbach (Germany). A mụrụ ya n'ụlọ Katọlik, nne ya, Renate Kausa na nna, Erich Kaus. Aha nna ya, nke Stegen, bụ ụbọchị ndị a abụghị otu na Germany ma ọ bụ sitere n'aka nnabata Dutch. Ter Stegen tolitere na nwanne ya nwoke, Jean-Marcel ter Stegen.
Mgbe ọ dị afọ iri na ụma nke 2, Ter Stegen malitere iso football ya na nwanne ya okenye na-egwu egwuregwu n'etiti ụlọ ahịa. Mgbe ọ dị afọ atọ, ọ mụtaworị ihe mbụ na-eme na egwuregwu ahụ. Ihe ohuru a mere ka nna ya buru nna ya na ndi nne na nna ya ka ha debanye aha ya n'akwukwo nke otu ndi ntorobia ndi ozo nyere ya ohere iji gosiputa talent ya.
Dị ka Stegen tinye ya;
"Nna m ukwu dị ọtụtụ, dị ka nne m na nna m. Ha nile kuru m gaa ọzụzụ; ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na mmiri zoo ma ọ bụ snow. Ha abanyeghị n'egwuregwu ọ bụla kwa ụbọchị, n'ihi na n'ikpeazụ, onye nchịkwa kpebiri ma ọ bụrụ na igwu egwu. Ọ dịghị mgbe ọ bụla ha nyere m aka, nke ahụ nyekwara m aka. "
Ihe kpaliri Stegen ka ọ bụrụ onye mgbaru ọsọ
Na mgbe ahụ, ihe Stegen mere bụ iji akara ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ ruo mgbe ọ gbanwere obi ya. Na mberede, ọ hụrụ mmasị n'echiche nke ịchọta ihe nchebe dịka ndị ọrụ ya nọ na-apụ n'otu oge. Dika ndi otu ndi ozo adighi enwe mmasị n'eche nche, Stegen kpebiri inye onwe ya. Ọ dị mkpa iburu n'uche na otu n'ime ndị nkụzi ya kpaliri ya ịrụ ọrụ afọ ofufo maka ihe mgbaru ọsọ n'ihi na ọ naghị amasị ụzọ Stegen na-agba ọsọ ka ọ na-egwuri egwu n'etiti ubi ahụ. Ter Stegen ji obi ụtọ cheta mgbe ya na mgbakọ egwuregwu mbụ ya;
"Amalitere m ịmasị otú onye ọ bụla si emeso m dịka onye nchebe. Ha na-agwa m mgbe niile na 'ị mara mma.' Kemgbe oge ahụ, anaghị m ahapụ ihe mgbaru ọsọ. Enwere m obi ụtọ na njem m. "
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu -Bilie na-ewu ewu
Marc-Andre Ter Stegen hapụrụ ụlọ ya mgbe ọ dị afọ 5 mgbe nne na nna ya debanyere ya banye na ụlọ akwụkwọ na-eto eto nke Borussia Mönchengladbach nke dị na obi obodo ya. Dị nnọọ ka Marcus Rashford, Ste Stegen ghọrọ ndị na-ahụ maka obodo Monchengladbach nke hụrụ ya n'anya dịka otu n'ime ha.
Ter Stegen ji afọ 14 bido (1996) gaa na 2010 n'oge agụmakwụkwọ na-eto eto, ọ na-agbanye mgbakọ niile tupu a na-ebuli ya elu.
Ogologo oge ya malitere na 2010 nakwa na ụlọ nkwari akụ ya, Borussia Mönchengladbach. N'otu oge ahụ, ọ kwadoro onwe ya dị ka onye mgbaru ọsọ kachasị mma kachasị mma mgbe ọ bụla nhọrọ nke ndị otu ya. Ọ bụ ezie na ọ na-enwe obi ụtọ na oge ọ ga-enwe ọganihu, a pụghị ikwu otu ihe ahụ maka ndị ọrụ ibe mbụ ya bụ ndị lụrụ ọgụ maka iwu.
Ọ bụ ezie na ndị agadi nọ n'akụkụ ahụ yiri ka ọ na-emezighị emezi ná mgbalị ha iji zere ọpụpụ, Lucien Favre nọchitere onye na-elekọta ha bụ Michael Frontzeck, bụ onye zụlitere ịdọ aka ná ntị nye otu ndị hụrụ na ọ dị mma. N'agbanyegh i ihe na-eme ka mmadu nwekwuo mmeri, otu onye n'ime ndi mmadu nwere mkparita mmadu na-adighi nma. O sitere n'aka onye nlekọta mgbaru ọsọ mbụ ha Logan Bailly ka ọ na-ejide ìgwè ahụ. Ndị Fans nke Mönchengladbach dị ngwa ịkatọ mba Belgium, ụfọdụ na-ebo ya ebubo na itinye mgbalị n'ime ọrụ nlereanya ya karịa football ya.
Otú ọ dị, ọ bụghị ndị na-akwado ya ka ndị Steeti na-enwe ọganihu maka ndị na-akwado ya. A manyere onye njikwa ọhụrụ ahụ ka ọ malite ịmalite na-eto eto na njikọ. Ndidi nwere kpamkpam na Bailly nke huru ya ka a duputara ya na bench maka ihu Stegen. Nwa okorobịa Germany amaghị nkụda mmụọ, o mere ka agbachitere ahụ nwee obi ụtọ na ike siri ike. Na-edebe akwụkwọ ọcha zuru oke, ndị otu ya zọpụtara site na nnyefe.
Ndị isi FC FC ndị na-achọgharị onye Victor Valdes nọchiri anya ya na-achịkwa ya mgbe akara ụda nke ụwa na-azọpụta maka ụlọ ọrụ ya. Na 19 May 2014, a kwupụtara Stegen ka ọ bụrụ onye nchebe ọhụrụ nke Spanish club Barcelona, ​​mgbe ọpụpụ Víctor Valdés na José Manuel Pinto. Na FC Barcelona, ​​ngosipụta ya mere ka ọ mara aha dị ka onye kasị mma na Europe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nchebe Germany ọ bụla, e nwere nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma. Mar-Andre Ter Stegen nwere Ndụ Ndụ. Daniela Jehle bụ enyi nwanyị mbụ na nwunye nke Ter Stegen. Ha abụọ malitere mmekọrịta dị ka ndị nọ n'afọ iri na ụma nke weere ha site na ezigbo enyi ọnọdụ na ezigbo ịhụnanya dị ka e sere n'okpuru.
Daniela Jehle nwere ụmụnne anọ; ụmụnne nwanyị abụọ aha ya bụ Katharina na Stefanie, otu nwanna nwoke aha ya bụ Timo na nwanne ya nwanyị aha ya bụ Lynn. Ọmarịcha Dutch nwere ụlọ akwụkwọ sekọndrị na San Diego, California. N'ihi onye hụrụ ya n'anya (Ter Stegen, o kpebiri ịga n'ihu na agụmakwụkwọ mahadum (ọmụmụ ụlọ) na Barcelona.
Marc-Andre ste Stegen na enyi nwanyị Daniela Jehle na 2017 nwere obere agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ dị nso na Barcelona. Shot-stopper Ter Stegen gosipụtara na ya bụ onye nlekọta kwesịrị ekwesị site n'ịnyere eriri ahụ mgbe ya na ya kpachara anya edebe na Dutch mara mma ruo afọ ise.
Jehle na Stegen nwere nkịta aha ya bụ Bali bụ onye gara efu na Christmas 2012 ma achọtara ya. Bali mere ka Daniela Jehle nọrọ jụụ mgbe nwoke na-apụ maka ọzụzụ ma ọ bụ kpọọ maka ụlọ ọrụ ya.
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu -Q na As
Marc Andre ter Stegen nyere ọnụahịa nkịtị na Catalan kwa ụbọchị
Ajụjụ: Ọ bụ eziokwu na otu n'ime ndị nkụzi gị anaghị amasị ụzọ i si agba ọsọ na nke mere ka ị bụrụ onye na-eche nche?
A: Ter Stegen nwere ihu ọchị ma zaghachi;
"Ee, o yiri ka ọ bụ ihe ijuanya, mana ọ bụ eziokwu. Ọ na-esiri m ike ịnakwere ya na mbụ, mana ọ bụ mkpebi kachasị mma m mere ná ndụ m. O kwuru na ọ dịghị amasị otú m si agba ọsọ. Nanị m gbalịrị ilekwasị anya n'ịbụ onye ọma dịka onye na-eche nche. "
Ajụjụ: Valdés na Mascherano kwuru otu oge kama ịkụ bọl, ha na-ata ahụhụ. Ị nwere oge ọjọọ?
A: Ter Stegen zara;
"Enwere m mmasị na ihe m na-eme, 100%. Onye ọ bụla dị iche, mana m hụrụ ihe m na-eme n'ọhịa. Enwere m ndị enyi na m na-emekọ nke ọma ma ha na-ekwe ka m soro ha na-egwu egwu. Nke ahụ na-enye m ohere igwu egwu dị ka m masịrị. Ọ bụ ya mere m ji nọrọ ebe a; Achọrọ m football. Enwere m ndi otu ndi otu ndi otu. Maka m, ọ dịghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi enwe ike ịme egwuregwu. "
Ajụjụ: GK na-eme ka ọtụtụ njehie. Kedu ihe ị na-eme iji merie mmejọ na olee otu ị si eji ha eche echiche?
"Imehie ihe bụ ihe mmadụ na-eme, ọ bụ ya mere m ji emeso ya otú ahụ. Na njedebe, anyị nile ada. E nwere ihe ọ bụla nwere ike ịka mma. Ana m agbalị mgbe niile izere ọdịda. Uchehie bụ echiche. Ọ bụrụ na ndudue bụ echiche nke ọdịda, ọ dị iche na ọdịda nke na-abịa n'ihi na i buru ọtụtụ ihe ize ndụ; i nwere ike izere imehie. "
Ajụjụ: Olee otu ị ga esi die nrụgide?
"Onye ọ bụla nwere ọdịiche dị iche. Maka m, enwere m mmasị ịkọrọ ndị mmadụ. Mgbe m nọ n'ụlọ, enwere m mmasị isoro nwunye m kwurịta okwu. Ọ dịghị eche banyere football, ma ọ dị ezigbo nso na m, nke ahụ na-enyere m aka. "
Ajụjụ: Ị na-akpọ Oliver Kahn mgbe niile dịka otu n'ime mmetụta gị. Ntak-a?
"Ee, karịsịa n'ihi echiche ya. Ọ dịghị mgbe ọ tụfuru uche, ọ dịghị ihe ọ bụla o mere. N'ezie, ọ chọghị, ma ọ dịtụghị mgbe ị chere na ọ metụtara ya n'onwe ya. Enwere ihe na-eme gị na football ma enwere ihe na-eme gị n'ogo onwe gị. "
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ezigbo Ndụ Onye
Ter Stegen bụ ihe bara uru na nke ọma. Ọ bụ onye na-enwe mmasị ịgha mkpụrụ nke ọrụ ya. Te Stegen na-ahụ ihe site na ọdịdị dị elu, nke dị irè ma dị mma.
Ter Stegen bụ onye na-eche na mkpa ịhụnanya na ịma mma gbara ya gburugburu. Nke a ka ọ na-ahụ na nwunye ya, Daniela Jehle.
Ter Stegen bụ ihe anụ ahụ, ọ na-ejighị ya kpọrọ ihe, ọ na-echekwa ma metụ ihe kachasị mkpa.
N'ihi nkwado nne na nna ya, Ter Stegen toro na-aghọ onye na-eguzosi ike na onye na-enweghị nchebe. Ọ bụ onye dị njikere ịtachi obi na ịrapagidesi ike na nhọrọ ya ruo mgbe ha ruru n'ókè nke afọ ojuju onwe onye.
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
Nne na nna ya na-akwado, Renate Kaus na Erich Kaus mere Ter Stegen ka ọ baara ha uru site na nkwado ha n'oge ọrụ ya. Site n'enyemaka maka mkpebi ya, nwa ha nwoke nọgidere na-eto ma na-enwe ọganihu n'ahịa ahia ya wee mee ka ọ bụrụ onye a maara na ọ bụ taa.
Nwanna: Dị ka e kwuru na mbụ, stegen nwere nwanne nwoke okenye nke aha ya bụ Jean Marcel. Ọ dị afọ isii karịa Stegen. Ụmụnna nwoke ahụ malitere ịkụ bọl na nso ụlọ ha n'etiti garages. Tupu Stegen ghọrọ onye na-eche nche, Juan Marcel nyeere ya aka ịmụta otú esi agba ụkwụ abụọ.
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu -Na-ajụ aha ya
Marc-Andre Ter Stegen mere njem ozugbo iji zere onwe ya site na iji ya tụnyere Lionel Messi n'agbanyeghị na e nyere aha aha 'Messi na akwa'. Nke a bịara mgbe a napụrụ ihe nkwụsị German maka ikike na-agafe na nkesa nke ọma.
Mgbe e jiri ya tụnyere nkà na ụzụ na Ballon d'ma ọ bụ na-emeri Messi, Stegen kpaliri ikewapụ onwe ya na moniker na-atọ ụtọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Marc-André ter Stegen Childhood Akụkọ na akụkọ eziokwu dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Ụmụaka Mario Gomez Na-agbakwụnye akụkọ nke na-enweghị ihe kpatara akụkọ ndụ